Inta badan, waxaa loo baahan yahay si loogu badalo ah file video MP4 galay file OGV ah. Dadka intooda badan waxay inta badan isku qaldin OGG iyo OGV. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in OGV waa qaab file video ah oo la soo saaro by Xiph.org. The lossy iyo qaab free video riixo waxaa inta badan lala xiriirinayay OGG Vorbis, isagoo qaab dambe ah bitstream cabira iyo furan weel kaas oo loogu talagalay ujeedooyin loogu geeyo iyo khalkhalgelinta.
Part1: Best MP4 in OGV Converter for Windows iyo MAC
Part2: MP4 Free in OGV Converter: Wondershare Video Converter Free
Qeybta 3: Aqoonta Extended u OGV
• Beddelaan Mpg in MP4, AVI, MKV, MOV, iyada oo aan trancoding.
• Beddelaan Mpg si toos ah lagana filaayo in presets suud aad telefoonada gacanta, ciyaartoyda, PSP, Madaxweyne Siilaanyo.
• shakhsiyeeyo Mpg video by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan, ECT.
• Gubashada Mpg ama qaabab kale video inay DVD disk.
Tallaabada 1 shuban File MP4 ka System galay Converter OGV ah:
Tallaabada ugu horreysa ee aad u baahan tahay si loo soo dajiyo MP4 in ay OGV Video Converter. Marka download la dhamaystiro, si aad u hanuuntaan doonaa iyada oo loo marayo hanaanka la rakibo. Markii uu dhamaystay rakibo, way kuu soo ordi karo barnaamijka, iyo dar files MP4 loo baahan yahay in ay. Naftaada badbaadi dhibaato ah ee uploading video ah oo si gooni gooni ah oo si fudud u jiidi video ka faylka gaarka ah ama folder. Haddii aadan rabin in la jiidayo, waxaad isticmaali kartaa fursad aad ku 'dar Files'.
Tallaabada 2 Calan Qaabka Output in OGV ah:
Waxaa muhiim ah in aad doorato qaabka saxda ah, halka qabanayaan beddelaad. Si fudud guji icon qaab image oo aad u horseedi doonaa in suuqa kala qaab wax soo saarka. Dooro OGV in qaabka> Video sida qaabka aad rabto in aad wax soo saarka. Sidoo kale, haddii aad raadinayso qaar ka mid ah qaabab kale, waxaad ka heli doontaa oo dhan oo iyaga ka mid qoran oo ay la socdaan qaab la doonayo. Doorashadaada waa in ujeedada oo u baahan in loo adeego la faylka la gediyay ku xiran tahay.
Tallaabada 3 Samee itusi yar si aad u Video:
Tani waa tallaabo optional, laakiin racfaan tifatirayaasha iyo xirfadlayaasha. Ka hor inta diinta video oo dhan, mid ka mid ah ka dhigi kara a itusi yar. By doorashada doorasho edit ah, daaqad cusub u muuqataa in uu aad video preloaded. Waxaad dooran kartaa ka fursadaha kala duwan iyo edit aad video. Qalab tafatirka Taasi uma baahna in wax tababar ah oo xirfad, oo ay interface fududeeyay, wuxuu noqonayaa qof u fududahay in la isticmaalo.
Tallaabada 4 Start Beddelaan ka MP4 in OGV:
Marka habka tafatirka waa dhameystiran (qaar ka boodi kartaa Doorashadan haddii aanay xaalkaa this video), waxaad bilaabi kartaa qaab beddelidda adigoo riixaya batanka ee koonaha midig. Ka dib marka aad riix badhanka 'diinta', diinta bilaabmin. Waxaad u helida horumarka diinta ee video iyo sidoo kale waxa ay baajiso, haddii aad dareento in ay jiraan wax kale oo la saxar ah.
Iyada oo ay interface fududeeyey oo ku hogaamiyay, Converter ku caawin kara qof, ka hiwaayadda u ah in xirfadle in diinta file MP4 ah in file OGV ah.
Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Free ka dib markii dhamaystirka rakibo:
Tallaabada ugu horreysa waa in ay ku rakibi website-ka. Si fudud u riixaya link awood u lahaa download ay u bilaabaan in web browser. Ka dib markii download waa dhameystiran, guji galka in la bilaabo geedi socodka rakibo.
Habka loo xirxiro waxay qaadataa dhowr daqiiqo oo aad ka arki kartaa qaababka kala duwan ee ay bixiyaan Wondershare Video Converter Free. Kadib markii geedi socodka rakibo dhamaato, guji "Hadda bilow 'in bilaabin isticmaalka Wondershare Video Converter Free ah.
Dooro file ka dibna aad rabto in aad wax ka bedel. Waxaad sameyn kartaa tani adigoo faylka jiidayeen galay suuqa kala Converter ama si fudud uploading faylka. Sida aad geliyaan faylka, Converter muujin doonaa qaab hadda aad file.
Dooro ka tiro ka mid ah qaabab dhinaca midig ee suuqa kala ah. Haddii aad raadinayso si loogu badalo faylka galay MP4, waxaad dooran kartaa fursad u gaar ah. Users New sahamin karaan fursado dheeraad ah iyo sidoo kale.
Waxaa jira qalab tafatirka kaa caawinaya in aad jar, jarid, nuqul, iyo sida diirada codsan oo ay la socdaan fursadaha kale ee tafatir ah. Interface ee qalab tafatirka taasi fududahay in la isticmaalo. Aad waxtar leh ee xirfadlayaasha iyo dadka isticmaala ka dhan domains.
Marka aad ku badbaadi itusi aad, aad haatan riixi kartaa 'badalo' oo sug hawlaha qaab beddelidda in lagu dhameeyo.
Xawaaraha Wareejinta waa 30 jeer ka dhakhsi marka la barbar dhigo converters kale.
Qalab gabi ahaanba waa bilaash ah, oo aan lahayn eedeeyay maqan yihiin in la siiyo.
Qalab tafatir ah sidoo kale waa la heli karaa, oo waxaa loo isticmaali karaa qof kasta sabab ay design fudud.
Shuruudaha Hardware Dhexdhexaadka ah, sidaas taas oo la heli karo ee dhammaan dadka isticmaala ka domains kala duwan.
Ma iman presets qalabka durugsan oo la qaadi karo.
Video tayada Output loo wanaajin karo. Isticmaalayaasha u ekaysiinnaa karo tayada arkay in Video Converter Ultimate.
1. Waa maxay file OGV ah?
Qaab A file yara yar oo loo yaqaan, OGV u ogolaanaya geeyo iyo Faragelin videos. OGV ula xiriira OGG. Kuwa aan aqaano, OGG waa qaab weel video bitstream ah. Waxa la yaab leh, qaab file OGV multiplex karaa CODECs badan oo il furan oo kala duwan oo madax banaan qoraalka, audio, iyo video. OGG ayaa CODECs ay fara badan lagu daro ciyaartoyda ganacsiga iyo sidoo kale lacag la'aan ah warbaahinta kala duwan, oo ay la socdaan ciyaartoyda la qaadi karo, sidaas kadambeeya in saarayaasha kala duwan, kuwaas oo ku dhacaya noqon boodda oo ah wiilashii Rafaa, oo iniinahoodu ku dhex. The files OGV soo haan sida aynu la kulmi ay isticmaalka bogagga internetka isticmaalaya tag HTML5 ah. Inta badan, files kuwan waxaa caadi tilmaansado sida faylasha OGG ee HTML, inkastoo qaabka file dambeeyaa yahay OGV.
2. Sidee u ciyaaro files OGV in Windows iyo Mac?
Ciyaaro files OGV in Windows:
Mid ka mid ah sidoo kale ku rakiban kartaa codes ka Xiph.org ka dib markii duuban. Sida furan il bulshada, waxa aanu shaqo ammaan mudan taageero badan oo qaabab riixo audio. CODECs ayaa awood WMP inuu u ciyaaro files OGV.
Diinta qaabab ah: Dad badan oo baakadaha software diinta audio jira socda file OGV ah ee WMP taageereen qaab. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suuro gal ah ee tanaasulka tayada. Conversion macno oo keliya haddii file ah oo ay tahay in la aduu qalab gaar ah, haddii kale la isticmaalayo habka kor ku samatabbixin karaa natiijada hufan.
Ciyaaro files OGV ee Mac:
Isticmaalka XiphQT taas oo Xiph.org Kooban QuickTime. Kuwani waa set oo ah QuickTime fur-tago. Iyada oo ay taasi fur-tago, Lugood iyo codsiyada kale QT ku salaysan ciyaari karo files OGV.
OGG dejinta sidoo kale caddayn karaan waxtar leh in xaaladdaasi. Waxaa encode lahaa kuwan raadkaygay audio iyo faylasha kale oo Vorbis. Iyada oo ay qayb ka QT, waxay u saamaxdaa Lugood inuu u ciyaaro files OGV kala duwan. Faa'iidada ugu weyn ee ay tahay in ay timaado lacag la'aan ah oo ah qiimaha wax.
3. Faraqa u dhexeeya OGG iyo OGV:
Inta badan, dad badan oo aakhirka wareeriya OGG iyo file OGV qaabab. Inkasta oo ay wadaagaan iskaga mid ka mid ah oo ay isku qaabab oo salka ku taageerto, waxaa muhiim ah in la ogaado in OGG waxaa loo isticmaali karaa ujeeddooyin audio iyo video labadaba, halka OGV inta badan waa weel file video.
Qaab file OGV waa u faa'iido badan ee dadka marti websites iyaga u gaar ah, portals, iyo website-e-commerce, oo aad si fudud u bedeli karaan faylasha aad qaab isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 ah in File OGV ah?